nari Archives - विवेचना
फेसबुक बुहारी समूहले गर्यो शिशु उपचारमा सहयोग
झापा, साउन ४ । विवाहित महिलाहरुले सञ्चालन गरेको बुहारी समूह (म्यारिड उमन सर्कल) नामक फेसबुक समूह झापाले चार दिनका एक शिशुलाई उपचारका लागि नगद ४९ हजार रुपैयाँ आर्र्थिक सहयोग गरेको छ । नशामा पलाएको ट्युमरका कारण मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका शिशुको सफल अप्रेसन भए पनि अस्पतालको शुल्क बुझाउन नसकी …
बैतडी । जीवनभर साथ दिने वाचा गरेर दलितकी छोरीसँग बिहे गरेका एक गैर दलित युवक सुत्केरी अवस्थामै श्रीमती छोडेर भागेका छन् । श्रीमतीले छोरी जन्माएको डेढ महिनामा सुत्केरी श्रीमतीसहित छोरी छोडेर भागेका उनी कहाँ छन्, के गर्दैछन् र किन भागे ? भन्ने कुराको अत्तापत्तो समेत छैन । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका …
ललितपुर । साउदी अरेबियाको सरकारको नयाँ नीतिले महिलालाई उनको श्रीमान् वा पुरुष आफन्तको अनुमतिबिना व्यवसाय खोल्ने अनुमति दिएको छ । यो नीति महिला सशक्तिकरणको शुरुआत र देशभित्र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्य अनुरुप आएको हो । यसअघि साउदी अरेबियाको सरकारले २५ वर्ष र सोभन्दा माथिका महिलालाई सहयोगीबिना साउदी अरेबिया घुम्ने …
नारी सञ्चार गृहमा अम्बिका भण्डारी
झापा । झापाली पत्रकार महिलाहरुको छाता संगठन नारी सञ्चार गृहको अध्यक्षमा अम्बिका भण्डारी सर्वसम्वत चयन भएकी छिन् । गृहको बिहीबार विर्तामोडमा सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनले भण्डारीलाई तीन बर्षे कार्यकालको लागि अध्यक्षमा चयन गरेको हो । संस्थाको उपाध्यक्षमा भीमा शिवाकोटी, सचिवमा रेजिन गौतम, सहसचिवमा स्वस्तिका आचार्य र कोषाध्यक्षमा सुशीला संग्रौला सर्वसम्वत चयन …
महिलाको‌ ने‌तृत्व नहुँदा समाजमा कति फर‌क पर्छ ?
पूजा आचार्य कुनै‌ पनि सुन्दर‌ समाज निर्माणका लागि सर्वप्रथम महिला र‌ पुरुष दुवै‌को‌ ने‌तृत्व हुन आवश्यक पर्छ । यदि हाम्रो‌ क्षे‌त्रमा पुरुषको‌ मात्र ने‌तृत्व र‌ह्यो‌ भने‌ अर्थात् महिलाले‌ ने‌तृत्व गर्नै‌ पाएनन् भने‌ हामी महिलाले‌ पाउने‌ हक अधिकार‌ गुमाउनु पनेर्‌ अवस्था आउन सक्छ । जुन आज भन्दा वषौर्‌ं अगाडिका महिलाले‌ दु:खदायी पीडित् जीवन …